Football Khabar » घाइते रोनाल्डोको अवस्था कस्तो छ ?
घाइते रोनाल्डोको अवस्था कस्तो छ ?
इटालियन क्लब युभेन्टस तथा पोर्चुगलका प्रमुख खेलाडी क्रिस्यिानो रोनाल्डो घाइते भएका छन् । गत राति सिरी ए लिगमा लाजियोविरुद्ध खेल्नेक्रममा ३५ वर्षका खेलाडीले चोट बोकेका थिए । अवे मैदानमा भएको खेलमा चोट बोकेपछि उनलाई ७५औं मिनेटमा मैदानबाट सब्सिच्युट गरिएको थियो । उनको स्थानमा पाउलो डिबालालाई मैदान छिराइएको थियो ।
रोनाल्डोको चोट कस्तो खालको हो र उनले आगामी खेल खेल्ने सम्भावनाबारे प्रष्ट भएको छैन । खराब ट्याकलमा पर्दा उनको देब्रे खुट्टाको गोलीगाँठो र जोर्नीमा हुलुका समस्या देखिएको बताइएको छ । खेलपछि कुरा गर्दै युभेन्टसका प्रशिक्षक आन्डे«ेया पिर्लोले रोनाल्डोको अवस्था खास गम्भीर नरहेको बताएका थिए । ‘प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले उनको चोट ठूलो र चिन्ताजनक छैन भन्ने ठानेका छौं । खेलपछि थप जाँच हुनेछ,’ पिर्लोले भने ।
खेलपछि युभेन्टसका मेडिकल टिमलाई रोनाल्डो आफैंले आफ्नो चोट गम्भीर नरहेको र जोर्नी–गोलीगाँठोमा सामान्य समस्या रहेको बताएका थिए । इटालियन मिडियाका रिपोर्टअनुसार रोनाल्डोको थप जाँच अब इटालीमा नभई पोर्चुगलमा हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय ड्युटीका लागि उनी आजै पोर्चुगल फर्किएका छन् । र, राष्ट्रिय टोलीमै मेडिकल टिमले उनको जाँच गर्नेछ । पोर्चुगलको मेडिकल टिमले थप जाँच गरेपछि रोनाल्डोले राष्ट्रिय टिमका आगामी ३ खेल खेल्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुराको तय हुनेछ ।
यता, पोर्चुगिज मिडियाले रोनाल्डोको अवस्था सामान्य रहेकाले उनले आगामी तीनमध्ये कम्तीमा दुई खेल खेल्ने करिब पक्का रहेको जनाएका छन् । यदि रोनाल्डोले चाँडै फिट महसुस नगरे उनले पहिलो खेल छाडेर दोस्रो र तेस्रो खेल खेल्न उपलब्ध हुने सम्भावना प्रबल छ । पोर्चुगलले आगामी बिहीबार आफ्नो भूमिमा आन्डोरासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । त्यसपछि नोभेम्बर १४ मा युइएफए नेसन्स लिगमा आफ्नै भूमिमा फ्रान्ससँग खेल्नेछ भने त्यसको ३ दिनपछि क्रोएसियासँग उसकै भूमिमा खेल्ने तालिका छ ।
प्रकाशित मिति २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १३:४३